I-China Cheese Process Factory, Umhlinzeki Wenqubo Yoshizi
Ama-JINGYE Milk Pasteurizers asetshenziselwa ukufudumeza ubisi emikhiqizweni yobisi, njengobisi olunanyisiwe, iyogathi, ushizi, i-ricotta, amakhekhe, njll.Bavumela ubisi ukuthi lushiswe phakathi kuka-4 ° C no-100 ° C. Ama-pasteurizers we-JINGYE akhiqizwa ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba, kanye nokutholwe kwakamuva komkhakha wobisi.Zenzelwe ukwenza imikhiqizo yobisi emnandi.
Imishini Yokushicilela Ushizi Womoya
JINGYE womoya cHeese ngokucindezela umshini eziyisisekelo, universal womoya ushizi ngokucindezela umshini, usebenzisa umoya onomfutho ukuze ushizi ngokucindezela. uma Udinga umshini wokushicilela oshizi ka-50-150 kg woshizi, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.Uma ungawuboni umshini wokucindezela ushizi ofanele ohlangabezana nezidingo zakho, noma wehliswe ukukhetha, vele usishayele. Sizobeka iminyaka yethu yesipiliyoni kanye nobuchwepheshe bokusebenzela wena. Ukwakha ifektri yokucubungula ubisi engcono enomkhiqizo wobisi osezingeni eliphakeme.